StableCoin စျေး - အွန်လိုင်း SBC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို StableCoin (SBC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ StableCoin (SBC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ StableCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
volume_24h_usd: $4 601.69
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ StableCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
StableCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
StableCoinSBC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00154StableCoinSBC သို့ ယူရိုEUR€0.00131StableCoinSBC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00118StableCoinSBC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00141StableCoinSBC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0139StableCoinSBC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00978StableCoinSBC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0344StableCoinSBC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00577StableCoinSBC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00206StableCoinSBC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00215StableCoinSBC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0346StableCoinSBC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.012StableCoinSBC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00845StableCoinSBC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.115StableCoinSBC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.26StableCoinSBC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00212StableCoinSBC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00233StableCoinSBC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.048StableCoinSBC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0107StableCoinSBC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.164StableCoinSBC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.83StableCoinSBC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.597StableCoinSBC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.113StableCoinSBC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0426
StableCoinSBC သို့ BitcoinBTC0.0000001 StableCoinSBC သို့ EthereumETH0.000004 StableCoinSBC သို့ LitecoinLTC0.00003 StableCoinSBC သို့ DigitalCashDASH0.00002 StableCoinSBC သို့ MoneroXMR0.00002 StableCoinSBC သို့ NxtNXT0.116 StableCoinSBC သို့ Ethereum ClassicETC0.000218 StableCoinSBC သို့ DogecoinDOGE0.44 StableCoinSBC သို့ ZCashZEC0.00002 StableCoinSBC သို့ BitsharesBTS0.0563 StableCoinSBC သို့ DigiByteDGB0.0495 StableCoinSBC သို့ RippleXRP0.0051 StableCoinSBC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00005 StableCoinSBC သို့ PeerCoinPPC0.005 StableCoinSBC သို့ CraigsCoinCRAIG0.684 StableCoinSBC သို့ BitstakeXBS0.0641 StableCoinSBC သို့ PayCoinXPY0.0262 StableCoinSBC သို့ ProsperCoinPRC0.188 StableCoinSBC သို့ YbCoinYBC0.0000008 StableCoinSBC သို့ DarkKushDANK0.481 StableCoinSBC သို့ GiveCoinGIVE3.25 StableCoinSBC သို့ KoboCoinKOBO0.342 StableCoinSBC သို့ DarkTokenDT0.00142 StableCoinSBC သို့ CETUS CoinCETI4.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 03:00:03 +0000.